Caawinta mujaahid&#039 - Aloha United Way 2-1-1
By Carolyn Hyman | Juun 2, 2022
Ku dhawaad dhammaan wicitaanada naloo soo diro 211 Khadka Caawinta Gobolka oo dhan ayaa naga tagay. Khabiiradayada waxa loo tababbaray inay dhegaystaan baahiyaha la hadlo iyo kuwa aan la hadlin labadaba. Mararka qaarkood, tani waxay u baahan tahay dadaal dheeri ah, aqoon iyo qalbi. Waxaan had iyo jeer isku daynaa inaan u gudubno mayl dheeri ah 211 isticmaale mar walbana waan ka mahadcelineynaa fursada aan ugu adeegno.
Ron. Waxay sharaxday in ninkeeda uusan heli karin Kaalmada Ciidamada Halyeeyga sababtoo ah naafanimadiisa oo aan xiriir la lahayn adeeggiisa. Waxay sii waday inay sharaxdo in ninkeeda uu ku jiro taageerada nolosha, mulkiiluhuna wuxuu ku wargeliyay in aanay kirada ku kacayn oo keliya gurigooda, balse aan heshiiskooda la cusboonaysiin doonin. Xaalada ninkeeda awgeed, guuritaanku ma fududa oo naagtu waxay u baahnayd gargaar degdeg ah. Sida nasiibku u heli lahaa, Ron waa mujaahid laftiisa oo si buuxda u fahmay arrinta.
Iyadoo baaritaanadii ugu horeeyay aysan midho badan dhalin, Takhasuska Ron waxa uu awooday in uu soo wacaha u gudbiyo u gudbinta Vets-ka Maraykanka iyo Hay'adaha Samafalka Katooliga ee Hawaii ee Adeegyada Taageerada Qoysaska Halyeeyga ah. Labada hay'adood ee aan faa'iido doonka ahayn waa wakaaladaha shuraakada ah ee Aloha United Way. Halka qofka soo wacay uu muujiyay mahadnaq weyn oo ku aaddan gudbinta iyo caawinta, Ron wuxuu ka mahadceliyey inuu ahaa khabiirka dhanka kale ee khadka. Raadinta mareegaha waxay soo saari kartaa waxyaabo yaab leh, laakiin waxaa jira waqtiyo cod ku yaal dhinaca kale ee taleefanka uu yahay waxa loo baahan yahay.
Haddii adiga, ama qof aad taqaan uu u baahan yahay gargaar, fadlan wac 211. Adeeggu waa bilaash, gobolka oo dhan. Wax badan ka baro AUW211.org.
Lagu dhejiyay 211 Answers oo lagu calaamadeeyay 211, Veteran